Window 8 တွင် zawgyi font သုံးနိုင်အောင်လုပ်နည်း ~ llphtooaung
Home မြန်မာခရစ်ယာန် အသင်းတော် (သမ္မာကျမ်းစာ) လေ့လာချင်သူများ Lailen History(လိုင်လင်း) PePe(lailente) (USA)
Video Editting ဆိုင်ရာ
Myanmar Font ဆိုင်ရာ
"God is Love".
Window 8 တွင် zawgyi font သုံးနိုင်အောင်လုပ်နည်း
Filled under: Myanmar Zawgyi Font ဆိုင်ရာများ
ဒီတစ်ခါတော့ Windows 8 အသုံးပြုသူများအတွက် zawgyi-one font အသုံးပြုနည်းလေး ပြောပြပါ့မယ်။ အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ လင့်လေးတွေကနေ zawgyi font ကိုဒေါင်းလော့ချလိုက်ပါ။ ပြီးရင် winrar ဖို်င်လေးကိုဖြေလိုက်ပါ။ ပထမဖိုင်ထဲမှာ setup ဆိုတာလေးကို အရင် install လုပ်ပါ။ ပြီးရင် ဒုတိယဖိုင်ထဲက IEZawGyiGtalkfont ဆိုတာကို install လုပ်ပါ။ ဒါဆိုရင်ပထမ အဆင့်ပြီးပါပြီ။
ဒုတိယအဆင့်က control panel ထဲဝင်ပြီး Language setting ကိုပြင်ဖို့လိုပါတယ်။
အဆင့်(၁) Control panel ကိုသွားဖို့ကရိုးရိုးလေးပဲ။ Desktop ပေါ်ကို right click ထောက် personalize ကိုကလစ်ပေးပါ။ ညာဘက်ထိပ်မှာ Control Panel Home ဆိုတာကို ကလစ်ပေးပါ။ Windows 8 ဖြစ်တဲ့အတွက် Language ဆိုပြီးကမ္ဘာလုံးပုံလေးကို ကလစ်ပေးပါ။
အဆင့်(၂) အဲဒီမှာ Advaced settings ဆိုတာကို လကစ်ပေးပါ။
အဆင့်(၃) Override for default input method ဆိုတာကိုရှာ၊ အဲဒီအောက်က ဘားလေးထဲမှာ English(United States)- Zawgyi Myanmar Unicode L ဆိုတာလေးကို ရွေးပေးပါ။ ဒါဆိုရင် zawgyi font ကို windows 8 မှာ အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။
To download (for zawgyi font) http://www62.zippyshare.com/v/83490868/file.html
To download (For unicode) http://www16.zippyshare.com/v/77549211/file.html
Antivirus ဆိုင်ရာ (11) computer ဆိုင်ရာစာအုပ် (14) Converter (5) Coppy (7) Desktop ဆိုင်ရာများ (22) Driver ဆိုင်ရာများ (9) E-BOOKS စာအုပ်ဆိုင်ရာများ (66) Facebook ဆိုင်ရာများ (6) Game (6) HOW TO နည်းလမ်းများ (63) INTERNET ဆိုင်ရာ SOFTWARE များ (39) Iphone/ Ipad/Ipod ဆိုင်ရာများ (15) Knowledge ဗဟုသုတ ဆိုင်ရာများ (21) Myanmar Zawgyi Font ဆိုင်ရာများ (9) Photoshop ဆိုင်ရာ (29) player ဆိုင်ရာများ (3) PORTABLE ဆိုင်ရာ Software များ (11) Recording and Music (15) Recovery ဆိုင်ရာ (2) SOFTWARE ဆိုင်ရာများ (46) SYSTEM CLEANER ဆိုင်ရာ Software များ (43) USB and CD/DVD ဆိုင်ရာများ (14) video (1) Video Editting ဆိုင်ရာ (32) Windwns ဆိုင်ရာများ (17)
llp-ထူးအောင်(နည်းပညာ)လေးမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါတယ်.လာရောက်လည်ပတ်နိူင်တဲ့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ..Keima Site lata navaw chareitheipa vata eichaly kaw.KhaZopa ta novahna phapa byhna chapie maw se..vaw charei hy ma y..
Coler Code ယူရန်..
Zawgyi Font for (64)or(32)bit..
Zawgyi Font for(64)or(32)bit .Download here..
Myannar Unicode.Download here..
E-mail tawta areikhopa zy...
FB ပေါ်မှာဖတ်ချင်ရင် Like ပေးခဲ့ပါ.
Arei haipa zy..ဖတ်ရှိနေသူများ..
Antivirus ဆိုင်ရာ (11)
computer ဆိုင်ရာစာအုပ် (14)
Desktop ဆိုင်ရာများ (22)
Driver ဆိုင်ရာများ (9)
E-BOOKS စာအုပ်ဆိုင်ရာများ (66)
Facebook ဆိုင်ရာများ (6)
HOW TO နည်းလမ်းများ (63)
INTERNET ဆိုင်ရာ SOFTWARE များ (39)
Iphone/ Ipad/Ipod ဆိုင်ရာများ (15)
Knowledge ဗဟုသုတ ဆိုင်ရာများ (21)
Myanmar Zawgyi Font ဆိုင်ရာများ (9)
Photoshop ဆိုင်ရာ (29)
player ဆိုင်ရာများ (3)
PORTABLE ဆိုင်ရာ Software များ (11)
Recording and Music (15)
Recovery ဆိုင်ရာ (2)
SOFTWARE ဆိုင်ရာများ (46)
SYSTEM CLEANER ဆိုင်ရာ Software များ (43)
USB and CD/DVD ဆိုင်ရာများ (14)
Video Editting ဆိုင်ရာ (32)
Windwns ဆိုင်ရာများ (17)
Edited by: Htooaung